စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေက သင့်ကို ဘယ်လို စိတ်ခံစားမှုတွေ ပေးနိုင်လဲ ? | MyanLearn Article
စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေက သင့်ကို ဘယ်လို စိတ်ခံစားမှုတွေ ပေးနိုင်လဲ ?
စာအုပ်တွေနဲ့ တံခါးပေါက်တွေဆိုတာ အတူတူလိုပါပဲတဲ့။ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အခြား နေရာတစ်ခုကို ရောက်သွားစေတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့်လည်း စာဖတ်ခြင်းကို နှစ်သက်ကြသူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာလေးတွေမှာ တသီးတခြားနဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့နေတတ်ကြသူတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ ဆိုတော့ စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေ ဖတ်တဲ့အခါမှာရော ဒီလို ခံစားချက်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါ့မလားလို့ အများစုက မဖတ်ခင်မှာတွေးတတ်ကြမှာပါ။
Android - https://bit.ly/MLw_20211005
iOS - https://bit.ly/MLFB_i20211004
တကယ်တော့ စာအုပ် ဆိုတာ ဟင်းတစ်ခွက်ဆို စာအုပ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာ အရသာအရှိဆုံးအဆီအစိမ့် အပိုင်းလေးတွေကို ရွေးဖယ် ကောက်နုတ်ထားတာပါ။
ဒီတော့ စာအုပ် အနှစ်ချုပ်တွေကို ဖတ်တဲ့အခါ
• စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ လိုတိုရှင်း အရသာ အဆီအနှစ်လေးတွေကို ထိထိမိမိနဲ့ မြည်းစမ်းဖတ်ရှုနိုင်မယ်။
• အားလပ်ချိန်လေး လုပြီး စာဖတ်ရသူတွေအတွက်လည်း အချိန်တို နာရီ မိနစ်ပိုင်း အတွင်း မိမိစိတ်ကြိုက် တစ်အုပ်ပြီး တစ်အုပ် ဖတ်ရှုနိုင်တာမို့ စာအုပ်များများနဲ့ မြန်မြန် ဖတ်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရနိုင်မယ်။
• ဘဝအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကိုမှ အချိန်တိုအတွင်း ရွေးဖတ်လိုက်ရတယ်၊ လိုက်နာမှတ်သားလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ပီတိဖြစ်ရတယ်။
• ဗဟုသုတ၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား၊ဘဝပြဿနာ ဒါတွေ အားလုံးကို စာအုပ်အနှစ်ချုပ်ထဲမှာ ထိထိမိမိနဲ့ ခဏအတွင်း အဖြေရှာ နည်းနာတွေ ရယူလိုက်ရသလို မို့ စာအုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အကြံပေးလိုက်သလို ခံစားရမယ်။
• အရင်က မဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့ စာအုပ်ထူထူတွေ ကြည့်ရင်း စာဖတ်ရဦးမယ် ၊စာမဖတ်ဖြစ်တာကြာပြီ စသဖြင့် ဖိအားမျိုးတွေနဲ့ ကိုယ် ဝါသနာပါတဲ့ စာဖတ်တာကို အချိန်မပေးနိုင်၊ အာရုံမစိုက်နိုင် ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေကို ဖွင့်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ် ဖတ်ချင်နေတဲ့ စာအုပ်က ဒီလို အကြောင်းအရာပါလား ၊ ဒါတွေ အကြံပေးထားတာပါလား စသဖြင့် အစအဆုံး တစ်အုပ်လုံးရဲ့ အနှစ်အရသာတွေကို (ပျမ်းမျှ အားဖြင့် မိနစ် ၃၀ - တစ်နာရီ) အချိန်တိုအတွင်း လက်တွေ့ကျကျနဲ့ သိလွယ်မှတ်လွယ် ခံစားလွယ်အောင် ဖတ်ရှုရဦးမှာပါ.။
ကဲ …. ဒါက စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေ ဖတ်တဲ့အခါ ဘယ်လို ခံစားမှုတွေ ရမလဲ ဆိုတာကို ယေဘုယျ သဘောအနေနဲ့ မျှဝေပေးထားတာပါ။
စာဖတ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ စိတ်ခံစားမှု ၊ အတွေးအမြင် အပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ်တိုင် ရရှိလာမယ့် ခံစားမှုတွေကိုလည်း အမျိုးမျိုးရှိနေဦးမှာပါ။
ဒါကြောင့် စာအုပ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာကို မမြည်းစမ်းကြည့်ဖူးသေးရင် ခုပဲMyanLearn စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေကို ဖတ်ရှု ခံစား ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ။
Fashion Illustration Design Course